मैले आफ्नो क्रेडिट रकम कसरी जाँच्ने?
आफ्नो क्रेडिट रकम जाँच्नका लागि *118# डायल गर्नुहोस्।
मैले आफ्ना नि:शुल्क कलहरूको मान्यता अवधि कसरी जाँच्ने?
तपाईंले *118*6*3*1# मा डायल गरेर वा MYUMOBILE एप -> “Freebies” द्वारा UMB मार्फत जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले आफ्नो नि:शुल्क इन्टरनेट कोटाको ब्यालेन्स कसरी जाँच गर्न सक्छु?
तपाईंले *118*6*3*2# मा डायल गरेर वा MYUMOBILE एप -> “Freebies” द्वारा UMB मार्फत जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले असीमित पावर योजनामा स्विच गरेपछि मेरो बाँकी क्रेडिट रकम (कुनै भएमा) के हुन्छ?
RM3 को स्विचिङ शुल्कमा कटौती गरेपछि तपाईंको बाँकी क्रेडिट रकमलाई ट्रान्सफर गरिनेछ।
निष्क्रिय अवधिमा मेरो दर योजना स्विच गर्न मलाई अनुमति हुन्छ?
हुँदैन। तपाईं सक्रिय अवधिमा हुँदा मात्र योजना स्विचिङको लागि अनुमति हुन्छ।
असीमित पावरबाट पावर प्रिपेड योजनामा कसरी योजना स्विच गर्ने?
तपाईंले *118*6*2*3# मा डायल गरी UMB मार्फत वा “MIG UNLIMITED” लेखेर 28118 मा SMS पठाएर योजना स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
म पावर प्रिपेड योजना रूचाउँछु। मैले नयाँ असीमित पावर योजनाबाट मेरो अघिल्लो प्रिपेड योजनामा कसरी स्विच गर्न सक्छु?
हो, तपाईंलाई पावर प्रिपेड योजनामा स्विच गर्न अनुमति हुन्छ। यद्यपि, पावर प्रिपेड योजनाका सदस्यहरूले असीमित पावर योजनामा मात्र स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।
योजनाहरू स्विच गर्नाले, मेरा सबै अवस्थित प्रोमोहरू र हाल प्रयोग भइरहेका सदस्यताहरूमा के हुन्छ?
नयाँ योजनामा स्विच गर्नाले सबै प्रोमोहरू र सदस्यताहरू जफत गरिनेछ।
मैले मेरो विद्यमान U प्रिपेड योजनाबाट असीमित पावर योजनामा स्विच गर्न सक्छु? कुनै शुल्कहरू लाग्छ?
लाग्छन्। विद्यमान U प्रिपेड, नयाँ U प्रिपेड तथा पावर प्रिपेड योजना सदस्यहरूलाई असीमित पावर योजनामा स्विच गर्न अनुमति हुन्छ। RM3 को एक पटकको योजना स्विचिङ शुल्क हुनेछ।
यदि म पावर प्रिपेड योजनामा स्विच हुन चाहन्छु भने, मैले के गर्नुपर्छ?
तपाईंले *118*6*2*3# मा डायल गरेर वा “MIG POWER” लेखेर 28118 मा SMS पठाएर योजना स्विच गर्न सक्नुहुन्छ।